Forever Cottage - I-Airbnb
Ikamelo e-indlwana ibungazwe ngu-Grace
Endleleni eshayiwe, indlwana encane ebekwe eweni, ulwandle lwakho oluyimfihlo kakhulu ngezansi nje. Hamba uye ezimpophomeni ezinhle ezindleleni ezihamba kahle ezibheke ugu noma ugibele isikebhe nomdobi wendawo. Leli kotishi lesitayela se-colonial yaseBrithani - ukunethezeka nobumfihlo, ikhofi ehamba phambili yase-Jamaican, i-eco friendly, ikhaya le-solar powered resort. Yamukela izihambeli zazo zonke izizinda, phela isiqubulo sase-Jamaica esithi “kubantu abaningi, abantu munye” siyindlela izivakashi eziphathwa ngayo lapha eForever Cottage.
Uma unokuvumelana nezimo ukuze uhlele ukuhlala kwakho phakathi nenyanga egcwele, ukubuka kuhle kakhulu ukubuka inyanga iphuma emkhathizwe. Izithombe aziwuthathi kahle umlingo.
4.94 · 19 okushiwo abanye
I-Strawberry Fields yethu iyindawo encane ephephile engeke iphumelele ehlanganisa abadobi bendawo, umphakathi wama-rasta, ingxube ehlukahlukene yabantu bangaphandle abenze ikhaya labo, izingcweti zezandla ezinekhono kanye nabalimi abathile. Isibalo sabantu singaphezudlwana kwe-100 mhlawumbe, nika noma thatha abambalwa. Izivakashi zamukelwa abantu abafudumele, abanobungane abangeke bahlukumeze izivakashi kodwa abahlale betholakala ukuze bakwenze uzizwe usekhaya njengoba uhamba emigwaqweni yethu ewubhuqu. Sicebile ngomlando, sinezakhiwo ezimbalwa zekhulunyaka le-16 ezisamile futhi ezilindele ukuhlola.
Nginikeza izivakashi zami inketho yokuxhumana nathi noma uma zincamela ukuba nobumfihlo lokho kulungile futhi.